टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज भारतको पोल्टामा – Upahar Khabar
टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज भारतको पोल्टामा
COLOMBO, SRI LANKA - OCTOBER 02: Yuvraj Singh of India celebrates the wicket of AB De Villiers of South Africa with teammates during the ICC World Twenty20 2012 Super Eights Group2match between South Africa and India at R. Premadasa Stadium on October 2, 2012 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pal Pillai/Getty Images,)
प्रकाशित मिति : २६ पुष २०७६, शनिबार ०९:२७ January 11, 2020
श्रीलंकाविरुद्ध तीन खेलको टी–२० अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज घरेलु टोली भारतले जितेको छ । पुनेमा शुक्रबार भएको अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा भारतले श्रीलंकालाई ७८ रनले हरायो । भारतले सिरिज २–० ले जितेको हो । दुई टोलीबीचको पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्ध भएको थियो । दोस्रो खेल भारतले सात विकेटले जितेको थियो ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा दुई एक रन बनाएको थियो । भारतका लागि लोकेश राहुल र शिखर धवनले अर्धशत बनाए । लोकेशले ५४ र शिखरले ५२ रन बनाए । मनिष पाण्डेले अविजित ३१, कप्तान विराट कोहलीले २६ र सार्दुल ठाकुरले अविजित २२ रन बनाए । श्रीलंकाका लाक्सन सान्डकानले तीन विकेट लिए । लाहिरु कुमरा र वानिन्दु हसरंगाले एक एक विकेट लिए ।
प्रदेश नं. ३ को नामाकरणका लागि बागमती एक मात्र नाम दर्ता, राजधानी हेटौँडा र धुलिखेलको प्रस्ताव